सी एन एन (CNN) ले शेर्पा हरूलाई किन SUPER HUMAN भनेको रहेछ त ? - समायोजन खबर
सी एन एन (CNN) ले शेर्पा हरूलाई किन SUPER HUMAN भनेको रहेछ त ?
प्रकाशित मिति : बुधबार, माघ १२, २०७३
शेर्पाहरू हिमाल चढेर आफू मात्र फर्कंदैनन् । उनीहरूसँगै फर्कन्छ— अनुभव, कीर्तिमान, पैसा र नयाँ पर्यटकीय सम्भावना । यतिमात्र होइन, शेर्पाहरू हिमाल चढेर फर्कंदा जोखिम त घटाएर फर्कन्छन् नै, हरेकपल्ट नौलो मानिने हिमाली संसारको यात्राबाट आरोहीहरूलाई सकुशल फिर्ता लिएर आउँछन् । सिएनएनले त्यसै शेर्पाहरूलाई ‘सुपर ह्युम्यान’ भनेको होइन । यसका पछाडिको कारण हो— रहस्यमय यात्रा मानिने हिमाल आरोहणमा शेर्पाहरूको साहस, हाई अल्टिच्युडमा सर्भाइभ गर्न सक्ने फरक जिन र हिमालहरूमा बित्ने उनीहरूको जादुगरी जिन्दगी । त्यही असाधारण जीवनशैलीकै कारण शेर्पाहरू ‘सुपर ह्युम्यान’ भएका हुन् । सगरमाथा शिखरसम्म बाटो खोल्न
इन्जिनियरिङ गर्ने, बाटो बनाउने, आँखाकै पावरको भरमा मौसमको पूर्वानुमान लगाउने, हावापानी बदलिनेबित्तिकै भत्कने हिमाली बाटो मर्मत गर्ने, पुल हाल्ने, डोरी बाँध्ने, सामान ओसार–पसार गर्ने तथा आरोहीहरूलाई सकुशल सगरमाथामा पुर्‍याएर फर्काउने शेर्पाहरू नै त हुन् । अरू त केवल त्यही कोरिदिएको बाटो, हालिदिएको पुल र डोरीको सहायता लिँदै सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्छन्, झन्डा फहराउँछन् र फर्कन्छन् । हरेक आरोहण सिजनमा शेर्पाहरू यसमै खटिन्छन्— आफ्नो जीवनको परवाह नगरी । त्यसैले होला गत मार्चमा सगरमाथा आरोहण गरेका भारतीय नागरिक देवराज दत्तले एक अनलाइनसँग भनेका छन्, ‘सगरमाथा र शेर्पा दुवै अद्वितीय छन् । शेर्पाहरू भएनन् भने कसैले सगरमाथा चढ्न सक्दैनन् ।’ शेर्पाहरू सगरमाथा चढ्न अरूलाई मात्र सघाउँदैनन्, आफैं पनि वर्षैंपिच्छे सगरमाथा आरोहणमा फरक, भिन्न र नौला कीर्तिमान कायम गरिरहेका हुन्छन् । शेर्पा र कीर्तिमान घाम र छायाँजस्तै हुन् । हरेक शेर्पासँग कि त कीर्तिमान हुन्छ, कि त नयाँ अनुभव । त्यसैले त सधै नौलो मानिने हिमाली संसारको यात्रा शेर्पाहरूका लागि आफ्नो जीवनशैली बनिदिन्छ ।